गणतन्त्र फटाहातन्त्र नबनोस ! - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 03:38
गणतन्त्र फटाहातन्त्र नबनोस !
इनेप्लिज २०७२ वैशाख ११ गते १४:०५ मा प्रकाशित
नेपाल आखिर नेपाल नै हो र नेपाल नै रहन्छ फरक त्यहाँ भित्रिएको गलत संस्कार मात्र हो ! सत्य लाइ मनन गर्न नसक्नु र असत्यको वाटो हिडनुले विकास को साटो बिनास तर्फ देशलाई धकलियो ! नेता गिरि देखि कर्मचारी तन्त्र हुदै ब्यापारी सम्मका जमात आफ्नै सेवाग्राही जनता संग लुकामारी खेल्न पल्केका छन् ! पैसा को त नाम नै सुन्नु हुदैन, कुन बेला कसलाई लुट्ने र कसलाई भुट्ने अनि आफ्नो भागमा के कति बाडि चुडी खाने हो हिसाब किताब आगाडी नै सुरु हुन्छ ! लुटी खानेहरु मौलाएको देश भनी नेपाल चिनिने भएको छ जहाँ कानुनलाई समेत प्यारालाईज गराईएको छ ! हेर्दा हेर्दै भारतको बदनाम बिहार सप्रिएर विकासको गतिमा उन्मुख छ, त्यो सानों भुटानले कति लामों आर्थिक फटको मारी सक्यो तर नेपाल भने जहि को त्यही थेच्चिएको छ! संम्विधानको भूत देखाई भिखारी झै बिदेशी संग घुडा टेक्न वाध्य छ भने देश विकासमा लगाउनु पर्ने युवा शक्तीको श्रम वेची जेनतेन अर्थतन्त्र चलाउदै आएको कुरा घाम झै छ्याड्ग छ! यी विदेशीन वाध्य युवाले आज आफ्नो जन्मभूमि कै चुलो सल्काउन ठूलो योगदान तथा त्याग गरेका छन ! यीनले कहिल्यै विद्यमान गणतन्त्रको न्यानो ममता पाएनन बरू यीनलाई सदैव अपमान र विवेध गरियो ! नेपाल गणतन्त्र वाट फटाहातन्त्र तर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्ता गर्नै प्रशस्तै भेटिन्छन !
आफ्नो जन्मभूमि कसलाई पो प्यारों हुदैन र ? जहॉ बसे पनि नेपालीपन र नेपाली मन कहिल्यै पनी हटदैन ! के यी विदेशीन वाध्य युवालाई आफ्नो जन्मभूमिको विकास र सम्बिर्दिको कामना र चिन्ता गर्ने हक र अधिकार छैन ? एउटा नागरिक जो देश कै असफलताले विदेशीन वाध्य भयो र जस्ले अनेकौ जोखिमपूर्ण काम गरि आफ्नो श्रम बेची त्यही देशको चुलो सल्काउने ज़िम्मा लिएको छ, त्यसलाई किन सौतेनी ब्यवहार गरिन्छ ? यी ईमान्दारीपूर्वक काम गर्ने युवाले आफ्नो जन्मभूमि प्रती चिन्ता गर्दा अनेकौ आक्षेप लगाईन्छ ! बेला बेला नेताहरूले बेलगामी घोडा झै यीनलाई विदेशमा वसेर हैन श्वदेश आएर देशको चिन्ता गर भन्ने पनि गर्छन ! यी युवा शक्तिले आफ्नो जन्मभूमिको उन्नती र प्रगतिका लागी अतुलनीय योगदान गरेका छन! जस्ले लगानी गर्छ उस्ले आफ्नो लगानीको हिसाव पनी खोज्छ! जस्को कमाईको दानापानीले वोल्ने शक्ति आएको छ त्यो भुली वा नवुझी यी ईमान्दार देश भक्त युवाहरूको त्याग र भावना माथी प्रहार गरि यीनको योगदानको अवमुल्यन नगरियोस! विदेशमा बसी सदैव आफ्नो जन्मभूमिको सपना देख्ने यी महान युवालाई मेरो आत्मिय र भावनात्मक सलाम !!